I-Goldcrest Post kanye nabacebisi be-CinePointe ukusingatha iWorkshop ekulethweni kwamafilimu - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni we-NAB Show - I-NAB BONISA I-LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Goldcrest Post kanye ne-CinePointe Advisors Yokubamba iWorkshop Ekulethwa Kwefilimu
I-Goldcrest Post kanye ne-CinePointe Advisors Yokubamba iWorkshop Ekulethwa Kwefilimu
Umcimbi wobusuku obubili wabakhiqizi bamafilimu nabamadokhumenti abahlelelwe u-Okthoba 22 no29.
IGreater YORK City- Abacebisi beGoldcrest Post kanye neCinePointe Advisors bazoveza inqubo yokulungiselela amafilimu ukuthi asatshalaliswe kumhlangano obalulekile we-2-night titled Ukudiliva Ukulethwa Kwefilimu: Okufanele Kwaziwe Wonke Umkhiqizi. Kuhlelwe u-Okthoba 22 kanye ne-29 e-Goldcrest Post eNew York, umhlangano wokuhlose ihlose ukukhombisa abakhiqizi bamafilimu kanye nababhali bezithombe nabanye ababhekele ukwenza isabelomali nokuphatha amafilimu njengoba enza umsebenzi wawo wokukhiqiza.
Izikhathi zizonikeza ukuqonda ezicini zomthetho, ezobuchwepheshe nezomzimba zokulethwa kwefilimu, ezihlanganisa izihloko ezinhlobonhlobo njengokuthi kungaxoxiswana kanjani nemigomo yokulethwa kwezinkinga eziyinkimbinkimbi zezinto zokulethwa kwe-OTT. Abaholi bendawo yokusebenzela bazofaka i-CinePointe Advisors Business Advisor Business Advisor Stacey Smith, iGoldcrest Films iNhloko Yezokukhiqiza Gretchen McGowan kanye noMqondisi Ophethe We-Goldcrest Post uDenenic Rom.
Amaseshini omhlangano wokusebenzela afaka:
NgoLwesibili, ngo-Okthoba 22 (6: 30pm - 8: 30pm): I-Delivery Overview kanye Yezomthetho / Ukulethwa Kwedokhumenti
Kusho ukuthini ngempela "ukudiliva" ifilimu? Ukulethwa kuyisinyathelo esibalulekile, sokugcina esidingekayo ukulungisa ifilimu ukuze lisatshalaliswe futhi ukhokhwe. Futhi nokho kuvame ukucatshangelwa kusabelomali sokukhiqiza nokuhamba komsebenzi. UStacey Smith weCinePointe Advisors uzobuye ahlaziye amagama okwenziwa kwezidingo, aphule uhlelo lwangempela lokulethwa, achaze ukuthi angaxoxisana kanjani nemibandela yokulethwa kwabasabalalisi ukuze asindise isikhathi nemali, futhi anikeze umhlahlandlela ekugwemeni izingibe ezivamile ekulethweni kwezomthetho nemibhalo.
NgoLwesibili, ngo-Okthoba 29 (6: 30pm - 8: 30pm): Ukulethwa Komzimba Nobuchwepheshe
Indima yomkhiqizi iya ngokuya iya ngokuba yinkimbinkimbi ngenxa yokwaziswa okuseduze kokufikwa kokusebenza okusha kwekhamera kanye nokucaciswa okuyinkimbinkimbi kokulethwa kwe-OTT. Chitha ubusuku nabasebenzela iGoldcrest Post abazodonsa ikhethini “kumlingo” womsindo nokukhiqiza izithombe ngemuva. Bazodicilela phansi inqubo ngemiboniso ekhombisa ukunikela ngamathiphu wokuthi bangawenza kanjani umsebenzi wakho ngesikhathi nakwisabelomali.
Amathikithi omcimbi wobusuku be-2 yi- $ 175.00. Ukuhlala kunqunyelwe. (Abakhiqizi balulekwe ngokuqinile ukuthi bahambele zombili izikhathi, kepha inani elilinganiselwe lezihlalo lingahle litholakale ubusuku ngabunye ngama- $ 99 lilinye.) Amalungu e-New York Woman kumafilimu naseTelevishini athola isaphulelo se-10%.
Abaholi bendawo yokusebenzela
UStacey Smith, Abacebisi beCinePointe
Njengomkhiqizi onenkampani ekhiqiza nabakhiqizi abanolwazi, uStacey Smith uletha umbono oyingqayizivele emsebenzini wakhe wokubonisana ngezindaba zebhizinisi. UStacey waqala ubudlelwane bakhe besikhathi eside nosaziwayo emhlabeni jikelele futhi ezimele ngesihluku umenzi wefilimu UJim Jarmusch e1997, futhi kule minyaka elandelayo ye-16 ubuka ezezimali, ukukhiqizwa, ukulethwa kanye nokusatshalaliswa kwamafilimu afaka i-COFFEE AND CIGARETTES, IZIMPAWU ZOKUPHATHEKA KANYE NEZIQHAWU ZAMAHHALA (ophumelele umncintiswano weCannes Film Festival Grand Prix du Jury). Kwi-CinePointe Advisors, usebenza nabakhiqizi ukuhlinzeka ukulethwa okungasasebenzi kahle, okufika ngesikhathi futhi okungabizi, kanye nokusiza abakhiqizi kanye nabatshalizimali ukuphatha nokukhulisa imali etholwayo kumaphrojekthi kuwo wonke umjikelezo wokusabalalisa.
UGretchen McGowan, IGoldcrest Post
UGretchen McGowan uhola ukukhiqizwa kwamafilimu okulandisayo nokubhaliwe kwe-Goldcrest Films. Amaphrojekthi wakamuva afaka uTodd Haynes 'CAROL (Cate Blanchett, Rooney Mara), uBill Monahan no-Atlas Entertainment's MOJAVE (Oscar Isaac, Garrett Hedlund), I-Tea Shop's SLUMBER (Maggie Q), iBraveart Films' CARRIE PILBY (Nathan Lane, Bel Powley, UGabriel Byrne) nefilimu yempi yase-Australia ezayo, ISANGANISO SEQINISO: IBHASIDI LONG TAN.
Ngaphambi kokujoyina iGoldcrest, uMcGowan wakhiqiza amafilimu angaphezu kwe-25 njengomkhiqizi ozimele nakwimidlalo yamafilimu kaMark Cuban ye-HDNet, Amafilimu e-Open City ne-Blow Up. Ku-2014, uthole amagama amabili we-Emmy Award ngomsebenzi wakhe ku-HBO wedokhumenti, IYIPHI INDLELA IQHAZA LOKUQALA LAPHA? UKUPHILA NESIKHATHI SESI-TIM ETHERINGTON.
I-Domenic Rom, I-Goldcrest Post
Ukutholwa isikhathi eside komphakathi wokukhiqiza okusha waseNew York, uDomenic Rom ujoyine iGoldcrest Post e2019. Njengomqondisi ophethe, ubhekele imisebenzi yonke, umbono wamasu nokuhlela ukukhula.
URom phambilini ubesebenza njengomongameli kanye nemenenja jikelele yeDelxe TV Post Production Services, kulandela ukubamba isikhundla sokuba ngumphathi weDelxe, eNew York. Usebenze njengomongameli oyiphini eliphakeme kwaTechicolor Creative Services iminyaka emithathu, futhi wayeyisikhulu kwaPostWorks iminyaka ye-11. URom waqala umsebenzi wakhe wokuba ngumculi wombala ku-Unitel Video. Ngokuhamba kwesikhathi wajoyina iDuart Film Labs, lapho agcina esengumengameli ophakeme we-labs yayo yedijithali neyefilimu.
Mayelana ne-CinePointe Advisors
CinePointe Advisors yasungulwa enkolelweni yokuthi ubuciko be ukukhiqiza ifilimu kumele sisekelwe ngeqhinga elizwakalayo lebhizinisi ukuze uphumelele emakethe yanamuhla yokuncintisana futhi eshintsha njalo. Ithimba lethu lisebenza nabathengisi bezimali nabakhiqizi ukuhlinzeka ngemihlahlandlela yebhizinisi, amathuluzi kanye nokusekelwa okudingekayo ukuze imibono yokudala ibe yimikhiqizo engahanjiswa.
I-CinePointe inikezela ngezinsizakalo zokuphelelisa ezisekela iphrojekthi ngomjikelezo wayo wempilo ephelele, inikezela ngesakhiwo sebhizinisi esilungiselelwe ngenkathi sikhulisa inqubo yokudala. Noma ngabe sisebenza nomkhiqizi, inkampani yokukhiqiza, isikhwama sezezimali noma sokuzijabulisa, i-CinePointe inikezela ngezinsizakalo ezihambelana nezidingo zeklayenti ngalinye nezidingo zesabelomali.
Mayelana neGolidecrest Post
IGoldcrest Post iyindawo eholayo neyizimele yokukhiqiza esetshenziswayo, enikezela ngezixazululo zokudala ezizodwa zamafilimu wezici, ithelevishini ye-episodic, imibhalo kanye namanye amaphrojekthi. Itholakala kalula eNew West City's West Village, inkampani ihlinzeka amahhovisi abahleli, ama-dailies ase-set, ukuphothulwa kwezithombe, ukuhlelwa komsindo, i-ADR nokuxubha, nezinsizakalo ezihambisanayo. Izikweletu zakamuva zifaka Idola LaseRussia, Inyoni Ephakeme Yindiza, Iphunga layo, Uxolo ngokukupha, Amabhiliyoni, isehlukaniso, Unsane, I-Miseducation yeCameron Post; UJuliet, uNaked, uGogo kaHarlem, i-Laundromat futhi Amadada.
Okuthile Okuphakeme Okunyusa Ukuxhumana Kwama-charter 'iSpectrum Mobile njenge "Indlela engcono Yokwenza Iselula" - Disemba 10, 2019
Umsunguli we-Rising Sun Izithombe Umsunguli, uGail Fuller Oqanjwe NjengomHoli We-A-Year-Award Wonyaka - Disemba 6, 2019
I-Rising Sun Izithombe Inqobisa Imiklomelo Yokukhipha Kwe-2019 yase-Australia “Imboni Yezimboni” Ukuhlonishwa - Disemba 5, 2019
Ukusakaza-SocialMeida I-Cobalt Encoder okunikezwayo ukusatshalaliswa Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor imicimbi yemboni Ott ukukhiqizwa kokuthunyelwe SJGolden - Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Ubuchwepheshe be-TV I-Ultra HD Forum	2019-10-09
Ngaphambilini: Umqondisi Onjiniyela Oyinhloko / Wezinsizakalo Zobuchwepheshe-OKC 191007-UNCB-118
Olandelayo: Okuqukethwe kwe-BTS World Tour Show Kwe-Breathtaking AR Okuqukethwe